Nepal, iyo nyika yemakomo makuru uye nzvimbo dzinorota | Absolut Kufamba
Louis Martinez | | vamwe
Nepal inyika diki iri pamuganhu pakati pemahofori maviri: China and the India. Nenzvimbo ine makomo inosanganisira zvimwe zvezvikwiriso zve eHimalaya, Iyo inzvimbo yakakwana kana iwe uchida kukwira kana kukwira kuti unakidze nzvimbo dzinoyevedza dzinoonekwa kubva ku Annapurna kana kuva wako Everest.
Asi, kana iwe usina mweya unofarira, Nepal inewo zvimwe zvinhu zvakawanda zvekukupa. Unogona kushanyira maguta senge Patan, Kathmandu o Bhaktapur, nenzvimbo dzayo dzepakati nepakati, dzimba dzeumambo dzinoyevedza uye tembere dzakavanzika. Iwe unogona zvakare kuziva mapaki echisikigo. Uye, chero zvakadaro, Nepal ndiyo nzvimbo kwayo yekuti usvike iyo Nirvana. Kana iwe uchida kuzviziva, tinokukoka iwe kuti utitevere.
1 Chii chekuona nekuita muNepal
1.1 Everest naAnnapurna
1.2 Mapaki echisikigo eNepal
1.3 Kathmandu, guta guru renyika
1.4 Kathmandu Valley, imwe nzira yakakosha muNepal
1.5 Pokhara, iro rimwe guta revashanyi reNepal
2 Chii chekudya muNepal
3 Nzira yekusvika sei kuAsia nyika
4 Matipi ekufamba kuenda kuNepal
Chii chekuona nekuita muNepal
Tinogona kutanga rwendo rwedu kuNepal nekurovedza muviri zvishoma tobva tasvika pakuziva maguta aro makuru nenzvimbo dzayo dzinoyera, tisingakanganwe dzimwe nzvimbo dzepanyama dzine runako rwusinga dzikise iyo yemakomo.
Iwe haufanire kunge uri mukwikwidzi ane hunyanzvi kuti uswedere padhuze nepazvinhu zviviri zvinokwezva zveNepal: iyo Everest and the Annapurna. Unogona kukwira ku musasa wepasi yekutanga, iri pakukwirira kwemamita anopfuura zviuru zvishanu. Sezvo iwe uchigona kufungidzira, harisi rwendo rwakareruka sezvo runotora anenge mazuva gumi nemana uye kukwirisa kurwara kunoita kuti zvinyanye kuoma. Asi inodhura kune vashanyi vazhinji. Iwe uchazoda a mvumo yakasarudzika, asi ruzivo rwakakosha.
Iwe unogona zvakare kuenda kunofamba pamusoro paAnnapurna. Pamwe chete, vanoumba nzira yemakiromita mazana maviri nemakumi mashanu yaunogona kuita mumatanho uye zvakasiyana. Asi, chero zvakadaro, iwe unonakidzwa ne akasarudzika makomo nharaunda munyika.
Kune rimwe divi, ramba uchifunga mundangariro climatology. Mwedzi yakanakisa yekuwana aya makomo ndiGumiguru, Mbudzi naZvita kune rumwe rutivi uye Kurume, Kubvumbi naMay kune rimwe divi. Ndira naFebruary hazvikurudzirwe nekuda kwekushisa kwakadzika uye sinou. Kana zviri zvaJune, Chikunguru, Nyamavhuvhu naSeptember, inguva yemvura inoita kuti nzira dziome. Nekudaro, ichokwadi zvakare kuti, mumwedzi yakakodzera kwazvo yekushanyira makomo, kune huwandu hukuru hwevashanyi vanoda kuita nzira dzavo.
Mapaki echisikigo eNepal
Nyika yeAsia ine mapaki akati wandei. Unogona kushanyira uya waBardia, iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero uye inozivikanwa neayo maBangal tiger nemakona ayo mahombe. KANA iyo iri muLangtang, uko kune ingwe nemapere. Asi, pamusoro pezvose, iwe unofanirwa kuziva mapaki maviri akarongedzwa se Nhaka Yenyika.
Yokutanga ndeye iyo inobva kuSagarmatha, iri mudunhu re kumbu kuvhara chikamu chakanaka che Everest massif. Unogona kutanga rwendo rwako rwe mushanyi nzvimbo, iri muguta re Namche Bazaar. Kana zviri zve autochthonous marudzi, ndiyo nzvimbo yeTibetan antelope.
Yechipiri, yechikamu chayo, ndiyo Royal Chitwan National Park, iri kumaodzanyemba kwenyika uye yaive nzvimbo yemambo. Zita rako rinoreva "Mwoyo wesango", iyo inokupa iwe pfungwa yehuswa hwaunowana. Kana iri mhuka dzayo, ine mhando dzinoverengeka dziri panjodzi senge Indian chipembere kana iyo Ganges gharial, sauropsid hombe ine mhodzi diki inongobvumidza kuti idye pahove.
Kathmandu, guta guru renyika
Kushanyira Kathmandu kuri kupinda muguta revagari miriyoni vane migwagwa isina tara, kusvibiswa kukuru uye ruzha rwekunzwa. Asi iri zvakare kuwana zviyeuchidzo zvakanaka, zvimwe zvacho zvakakanganiswa nekudengenyeka kwenyika kwa2015.
Chinhu chekutanga chaunofanira kushanyira muKathmandu ndeche Durbar Square, iyo nucleus yakashanda senzvimbo yekugara yemhuri yehumambo. Saizvozvo, durbar zvinoreva "muzinda." Iyo inoumbwa nekwere uye migwagwa iri padyo nayo, ine zvivakwa zvehumambo netembere. Asi chinhu chinonyanya kufarira ndeche imba yeKumari. Iri izita rakapihwa musikana mudiki akasarudzwa kuti amiririre mwari wezita rimwe chete. Iye chimiro chetsika yeNewar uye kuti ave Kumari, musikana mudiki anofanira kukunda bvunzo dzakawanda. Uye zvakare, nepo basa rake richiripo, haakwanise kusiya imba yake-tembere zvachose.
Iwe unofanirwa zvakare kuona muKathmandu iyo Boudhanath stupa, imwe yeakakura kwazvo pasi uye akapfekedzwa korona nemaziso aBuddha. Masikati ega ega, mamonki anobva kumativi ese enyika anoungana pairi achinamata. Uye zvakare, kwakakomberedza une maresitorendi mazhinji uye zvitoro zvehunyanzvi hweTibetan.
Zvakare, iwe unofanirwa kusvika iyo Swayambhunath Buddhist tembere, izere netsika dzinoenderana netsoko, inova iyo World Heritage Site uye iri pachikomo chauchazoona iro guta rese. Pakupedzisira, shanyira iyo Kopan uye Phullari tembere uye zorora mu Bindu reMaroto, yakanaka neoclassical dhizaina paki iri pakati peKathmandu.
Kathmandu Valley, imwe nzira yakakosha muNepal
Iwe haugone kusiya guta guru usingazive izvo zvinonzi zvinonzi Kathmandu Valley, izvo zvinosanganisira izvo uyezve mamwe maguta maviri: Patan neBhaktapur, pamwe neuwandu hwe zana nemakumi matatu emamaki zvekukosha kwakadai kuti nzvimbo yakarongerwa se Nzvimbo Yemagariro Enyika Iri Mungozi.
Patan zvakare ine yako yakavanzika Durbar Square, rinovawo chivanze chemuzinda wemadzimambo ekare. Iyo zvakare ine akati wandei matembere senge Krishna's, Yakagadzirwa nematombo ane octagonal; Degutale o iyo Vishwanath, ine nzou dzedombo. Dzese dzakavakwa muzana ramakore regumi nemanomwe uye dzakaparadzaniswa nemapatio anodomwa nemazita chowks.
Kutaura Bhaktapur, inoonekwa seyakakosha tsika mutsika yenyika, zvakare ine senzvimbo yayo yetsinga iyo Durbar square. Munharaunda yayo, une zvivakwa senge Muzinda weMakumi mashanu neshanu Mahwindola Golden Door uye tembere senge Batsala, nebhero rayo guru, kana Pashupatinath, ine ayo akatanhamara erotic engra.
Havasi ivo voga mutaundi. Tembere Changu narayan, makiromita mashanu kubva pairi, ndiyo dangwe munyika yose, nepo Nyatapola, muTaumadhi square uye nemashanu akakwirira anomiririra mamiriro, ndiyo yepamusoro muNepal.
Pokhara, iro rimwe guta revashanyi reNepal
Iri guta rine hunhu hwakasiyana kwazvo kubva kune dzakapfuura, kechipiri chinoshanya kwazvo munyika. Nekuti kushanyira iri padyo nenzvimbo dzayo hazvireve kuti uone zviyeuchidzo zvikuru (kunyangwe zviripo zvakare), asi Anoshamisa maonero.
Mumakiromita makumi matatu chete, makomo anokwira angangoita zviuru zvinomwe zvemamita achigadzira migero inoshamisa. Mira pakati pavo iyo iri parwizi Gandaki, inova yakadzika pasi pasi. Iwe zvakare unayo munzvimbo yePoghaka iyo pewha nyanza, ine mapopoma maviri anoyevedza ayo mvura yawo, mushure mekudonha nepakati pawo, inonyangarika.
Gandaki Rwizi Gorge
Ingori pachitsuwa chiri mugungwa iwe unayo Barahi tembere, apo muchikamu chekare cheguta iwe une izvo zve Bindhyabasini y Bhimsen. Uye zvakare, Pokhara ndiyo imwe yematanho ekutanga ekushanya kuenda kuHimalaya.
Iri ndiro guta rechipiri reNepal nenhamba yevagari uye imwe yenzvimbo dzaro huru dzekugadzirwa kwemaindasitiri. Ndokusaka tichitaura nezvazvo kwauri. Zvisinei, ndeimwe yevashoma anoshandiswa kushanya parwendo rwako kuenda kuNepal nekuti haina zvivakwa zvinonyanya kushamisa.
Chii chekudya muNepal
Iyo gastronomy yenyika yeAsia mhedzisiro yezvakawanda zvinokanganisa. Izvo zvinonyanya kukosha ndezvavo vavakidzani vayo veIndia, Chinese neTibetan. Asi zvakare ine zvinhu zve Thai cuisine. Chero zvazvingaitika, hauzombowana madhishi ane nyama yemombe, nekuti iri mhuka inoyera kwechikamu chakanaka chevagari vayo.
Pane kudaro, une nyati nembudzi. Asi iyo yekubheka yenyika ndeye dal bhat tarkari, combo dhishi rine svumburu, mupunga, uye miriwo yakakangwa. Inoshandiswa pane tereyi ine zvinhu zvayo zvakasiyana uye inofambidzana nemagaka, lime, mandimu kana green chili.
Imwe yetsika dhishi ndeye momo, inoumbwa nerudzi rwemabhora enyama munzira yeTibetan nezvinonhuwira. Izvo zvakagadzirirwa, chaizvo, nenyati, mbudzi kana nyama yehuku, asi zvakare chete nemiriwo. Kana ari iye, chow mein kana kumutsa fry manoodles anouya kubva kuChina chikafu.
Mimwe yakajairwa ndiro iri kachila kana nyama yakakangwa nezvinonhuwira, iyo syen kana chiropa chakakangwa, iyo pukala kana nyama yakakangwa, iyo kwati kana muto webhinzi uye iyo wo kana keke rezai. Kana zviri zvekudyiwa, zvakajairika kune dhau kana yogati uye iyo abate, rudzi rwejamu rakaoma.
Ndiro yemomos ine muto
Pakupedzisira, maererano nezvinwiwa, tii ndiyo yenyika. Munzvimbo dzine makomo, kudziya, vanozvitora zvine simba kwazvo uye nehotela. Asi iwe unogona zvakare kuedza iyo mapfunde kana madoro emupunga; the muto wenzimbe shuga; iyo mahi, iri buttermilk kana iyo rakshi, yemapfunde distillate.
Nzira yekusvika sei kuAsia nyika
Nyika yeAsia ine nhandare yendege, iyo Tribhuvan yeKathmandu, kwendege dzinosvika dzichibva kumativi ese epasi. Kamwe ipapo, iwe une nzendo kune mamwe maguta. Nekudaro, isu hativakurudzire sezvo mamwe maairport muNepal ari madiki uye mamwe ane njodzi nekuda kwemakomo avo. Uye zvakare, ndege dzinoita kuti nzira dzivewo dzemhando yepamusoro.
Vazhinji vafambi vanosarudza kuenda kuNepal kubva kuNew Delhi. Vanozviita mukati Tren kuguta remuganhu we Raxaul, iyo ichiri yake India, uye wozotora bhazi kuenda kuKathmandu.
Chero mamiriro ezvinhu, kutaurirana haisi sutu yakasimba yeNepal. Iyo migwagwa iri mune yakashata kwazvo uye mabhazi anobatanidza maguta akasiyana siyana haana kugadzikana sezvo ari akadhura. Kune dzimwe mota kubva kumakambani akazvimirira idzo dzinodhura zvishoma, asi zvakare dzakatosununguka.
Chero zvazvingaitika, hazvikurudzirwe kuti ufambe mazviri husiku. Vatyairi vanowanzo tora mukana wemigwagwa isina chinhu kumhanya uye tsaona dzinowanzoitika. Saizvozvowo, kuba kwemikwende kunowanzoitika, saka tinokukurudzira kuti uvhare nekiyi.
Ukuwo, Mitemo yeNepalese inokutadzisa kutyaira mota yekurendesa. Pane kudaro, zvichave nyore kwauri kuti ubhadhare imwe ine mutyairi uye haina kunyanya kudhura. Chekupedzisira, kutenderera nemaguta makuru, iwe une izvo zvinozivikanwa Rickshaw zvese zvinofambisa uye zvemagetsi (izvo zvinonzi nguva, ayo akakura), pamwe nemakombi. Sechido, isu tinokuudza kuti, kuti uburuke pavari, unofanira kurova siringi nemari.
Durbar Square yePatan
Matipi ekufamba kuenda kuNepal
Kuti upinde muAsia nyika unofanirwa kuve neiyo pasipoti inoshanda kwemwedzi mitanhatu. Zvakare, iwe unoda a vhiza yakakosha chii chaunogona kugadzirisa paIndaneti in the dandemutande kubva kuDhipatimendi Rekupinda muNyika kana kuConsulate yeBarcelona. Kana iwe uchizoshanyira Himalaya kana mamwe makomo iwe zvakare unoda iyo NGUVA, yakasarudzika mvumo yaunogona kugadzirisa kana wasvika.
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kupfeka majekiseni akasiyana siyana. Dzinonyanya kujairika typhus, yero fever, korera, MMR, hepatitis, uye tetenasi. Malaria inowanzoitika. Nekudaro, Chiremba wako anozokuzivisa nezve izvi. Chero zvazvingaitika, kurudziro yedu ndeyekuti iwe utsvage a inishuwarenzi yakanaka yekufamba kuitira kuti unyatsochengetwa kuitira tsaona kana kurwara.
Kana iri mari yemunyika, ndizvo nepalese rupee. Tinokukurudzira, usati wafamba, kuti uchinje maeuro emadhora uye, kamwe chete kuKathmandu airport, ita zvakafanana neizvi kumari yemuno. Kune zvakare dzimba dzekutsinhana mumaguta, asi ivo vanobhadharisa yekuwedzera komisheni.
Pakupedzisira, tinokurudzira kuti unyorese iyo Kunyoresa Vafambi kubva ku Ministry of Foreign Affairs yeSpain kuti ive nyore kuwana kana paine matambudziko. Uye izvo, kamwe muNepal, unongonwa mvura yemabhodhoro uye izvozvo usaravira muchero usina kugezwa kana masaladi kunzvenga kufona "Manyoka emufambi".
Mukupedzisa, Nepal inyika yakanaka inokupa makomo marefu kwazvo panyika. Uye zvakare akawanda mamaki uye gastronomy zvakasiyana zvakanyanya kubva kumadokero. Kana uchida kurarama chiitiko chakasiyana, tinokukurudzira kuti uende kunyika yeAsia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Neparo